Virtual Reality - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Virtual chokwadi tekinoroji inogadzira chiitiko chinotora kune chero mushandisi chichivaita kuti vaone kuti vari kudyidzana nenharaunda yavo yedigital mune chaiye uye zvakare kugadzira chaiyo-yehupenyu simulations. Kuti uve wakaomarara, rakapotsa chokwadi inogadzira rakapotsa nyika revashandisi asi rakagadzirwa nenzira iyo musiyano uripo pakati penyika chaiye neyakajeka zvakaoma kuudza. Komputa inogadzirwa, yekunyepedzera simulation kana kutandara kwehumwe chaihwo hupenyu mamiriro ndizvo rakapotsa chokwadi ndizvo. Chiratidzo uye kunzwa kwemushandisi kunoenzanisirwa zvakanyanya, kuvanyudza mune rakasiyana zvachose nyika.
Senge yenzvimbo yehondo, imba yako yaizoshandura kuita nhandare yehondo ine 3D nharaunda kwaunofamba, kunyura uye kupindirana nerubatsiro rwemidziyo yakakosha yehardware. Kuti uwane VR, munhu anoda VR mahedhifoni uye iyo VR app, inoita zvese zviri zviviri hardware uye iyo Software nokuda kwayo. Iyo VR headset inokodzera pameso ako uye pamusoro pemusoro wako, uye nekuona inokubvisa kubva panzvimbo yemuviri yauri kugara. Inokuita kuti uwane chokwadi chakasiyana munzvimbo inogadzirwa nekombuta. NeVR unogona kutenderera Louvre, kukwira Grand Canyon, uye kunyura mumutambo wevhidhiyo usina kusiya mubhedha wako. Iyo inokwezva zvakanyanya uye saka iri kutorwa sechinhu chikuru chinotevera muindasitiri yetekinoroji. Muchikamu chevaraidzo, kubva mumafirimu akagadzirwa neHollywood kusvika kumitambo yemitambo uye makonzati anotenderera, VR yave nzvimbo yekuona midhiya yakakukomberedza. Kuti ubate idzi nyaya dzeVR, makamera matsva uye maturusi ari kuvakwa uye nhamba iri kuramba ichikura yekurodha uye kutenderera kwehupenyu. Nenguva isipi zviitiko izvi zvingaita sezvechokwadi kwete mafirimu zvakare. Chikamu chemitambo chiri pachena kuti ndiyo inonyanya kutonga nzvimbo yeVR iyo inopa vagadziri rusununguko rwekutora mitambo kuenda kunzvimbo itsva dzinoshamisa uye kutsiva iyo yakajairwa mafaro uye mabhatani ekudzora nekugona kubata nekusvika zvinhu. Dhizaini yave zvakare nyore neVR uko vagadziri vanogona kushandisa chaiwo maturusi kuvaka imba chaiyo kana patani motokari nezvimwe zvikamu zvemotokari sezvazvaiva chaizvoizvo. Wand-like controllers uye maapplication ari kutogadzira VR nhandare inoshamisa yekutamba uye munguva pfupi iri kuuya izvi zvichave zvakakosha kune ese ekugadzira basa. Virtual chokwadi inokatyamadza zvekuti mu musha chikamu, kunyangwe kubva mamaira kure, munhu aigona kufamba nyore kudzika imba yavanoshuvira kuita senge vanga vatovepo kana kukwana mufenicha yako yaunofarira kuti uone kuti ingatarise sei. Izvi zvese zvaigona kuitika neVR. iyo yaizobvumidza vashandisi vayo kuti vapinde muchitoro chekupfeka chine mhando dzisingaperi uye sarudzo dzekuyedza ipapo. Iye zvino fungidzira kukwira Gomo Everest pawakagara pamba kana kushanyira nzvimbo dzakakurumbira kana kutotora zviyeuchidzo zvako mu360-degree kamera. VR inogona kuenzanisira nyika nenzira inoshamisa yekuona, kemesitiri, mushonga, nyeredzi kana fizikisi, kuenzanisa kwayo kunogona kupa dhizaini, hunyanzvi, uye mazano mundima yega yega.
Chero zvarinodhura, zvine njodzi kana zvisingaite muchokwadi, rakapotsa chokwadi ndiyo mhinduro. Virtual chokwadi inotibvumira kutora njodzi dzinongoitika dzoga kuitira kuti tisangane nenyika chaiyo, kubva kune vanovhiya vanodzidzira basa rekurapa kusvika kune vanodzidzira vatyairi vendege, VR iri kuwedzera. VR inogona kuitwa mune chero mhando yenhau angave mavhidhiyo kana mafirimu asi izvo zvingangogoneka kuburikidza neVR Hardware senge magirazi uye mahedhifoni ari kugadzirwa nemakambani akaita seOnePlus, Samsung neOculus Rift. The Virtual chokwadi parizvino haisi kungogumira pasocial network nemitambo yemavhidhiyo yakagadziridzwa nharaunda chaiyo asi ine nzvimbo yakakura. Virtual chokwadi inoshandisa tekinoroji yakawanda kuzadzisa chinangwa chayo chekupa nharaunda chaiyo ine mhinduro dzakakodzera munguva chaiyo uye ichi chiitiko chehunyanzvi chakaoma icho chinofanira kuzvidavirira pakuziva kwedu uye maonero. Virtual chokwadi uye Augmented reality, kana ikashanda pamwe chete, inogona kuchinja zvakanyanya nzira yatinoona nekutaurirana nenyika pamwe nezvimwe zvinhu.